တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းယေရှု? - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-01 > ယရှေုသညျတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း?
လူအချို့ကကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုဝါဒအရလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ဘာသာတရားအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည့်သည်းခံမှုကိုမျှော်လင့်။ တောင်းဆိုနိုင်သည်၊ ဘာသာတရားများအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အယူအဆကိုဘာသာတရားအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်တန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်။
အားလုံးလမ်းများတူညီသောဘုရားသခင်အား ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ အချို့လူများက၎င်းကိုသူတို့ကလမ်းခရီးတွင်ရှိနှင့်သကဲ့သို့ယခုခရီးစဉ်၏ ဦး တည်ရာမှပြန်လာကြပြီဟုပြောဆိုကြသည်။ ထိုသို့သောလူများသည် narrow ၀ ံဂေလိတရားကိုတစ်လမ်းတည်းသာ ယုံကြည်၍ ငြင်းပယ်သောကျဉ်းမြောင်းသောလူများကိုသည်းမခံပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤအရာသည်အခြားသူများ၏ယုံကြည်မှုများကိုပြောင်းလဲရန်ထိုးစစ်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်လမ်းတည်းပဲယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလဲချင်တယ်။ အခုဘယ်လိုလဲ သခင်ယေရှုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကသွန်သင်ပါသလား။
ဘာသာတရားအများစုသည်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ သြသဒေါက်ဂျူးများသည်စစ်မှန်သောနည်းလမ်းရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှအကောင်းဆုံးသောဖွင့်ဟချက်ကိုမွတ်စလင်မ်များကသိကြသည် ဟိန္ဒူတွေကသူတို့မှန်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဗဟုဝါဒီပင်လျှင်ဗဟုဝါဒသည်အခြားအတွေးအခေါ်များထက် ပို၍ မှန်ကန်သည်ဟုထင်သည်။
ထို့ကြောင့်လမ်းအားလုံးသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကို ဦး တည်ခြင်းမရှိကြပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာတရားများပင်ကွဲပြားခြားနားသောဘုရားတို့ကိုဖော်ပြရန်။ ဟိန္ဒူဘာသာများသည်နတ်ဘုရားများစွာရှိပြီးကယ်တင်ခြင်းကိုဘာမျှပြန်မရသောအဖြစ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်မူဆလင်များသည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်ကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးများကိုအလေးထားကြသည်။ မွတ်စလင်ရောဟိန္ဒူရောပါသဘောမတူပါ၊ သူတို့၏နည်းလမ်းများသည်တူညီသောပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်သည်။ သူတို့ကအဲဒီအတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲပစ်တာထက်တိုက်ခိုက်တာပဲ။ အနောက်တိုင်းဗဟုဝါဒီများကသူတို့ကိုယ်သူတို့ကသဘောမကျတဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဘာသာရေးကိုစော်ကားတာဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်တာတောင်မှအများကိန်းမလိုချင်တဲ့အရာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်သတင်းစကားသည်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်လူတို့အား၎င်းကိုမယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်နှင့်အမျှယုံကြည်မှုသည်လူတို့အားမယုံကြည်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကဘာကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုထောက်ခံနေရင်တောင်ဘာသာတရားအားလုံးဟာမှန်တယ်လို့ငါတို့မဆိုလိုပါဘူး။ အခြားသူများကိုသူတို့လိုချင်တာကိုယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကျမ်းစာတောင်းဆိုမှုများ / တောင်းဆိုမှုများ
Johannes မှာ 8,12 sagt er «Ich bin das Licht der Welt» und in Johannes 14,6-7 steht«  Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.» Jesus selbst sagte, da Menschen, die behaupten, es gäbe andere Wege zu Erlösung, falsch liegen. Petrus war genauso deutlich, als er mit den jüdischen Herrschern sprach: « Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden» (Apostelgeschichte 4,12).
Paulus verdeutlichte es auch noch einmal als er sagte, Menschen, die Christus nicht kennen, seien durch ihre Übertretungen und Sünden tot (Epheser 2,1). Sie hatten keine Hoffnung und trotz ihres religiösen Glaubens hatten sie Gott nicht (V. 12). Er sagte, da es nur einen Mittler, nur einen Weg zu Gott gibt (1. တိမောသေ 2,5). Jesus war das Lösegeld, das jeder brauche (1. တိမောသေ 4,10). Wenn es irgendeinen anderen Weg geben würde, der zur Erlösung führe, hätte Gott ihn geschaffen (Galater 3,21). Durch Christus ist die Welt mit Gott versöhnt (Kolosser 1,20-22). Paulus war berufen, die gute Nachricht unter den Nichtjuden zu verbreiten. Ihre Religion, sagte er, war wertlos (Apostelgeschichte 14,15). Bereits im Hebräerbrief steht, es gebe keinen besseren Weg als Christus. Im Gegensatz zu allen anderen Wegen ist er wirksam (Hebräer 10,11). Das ist kein relativer Vorteil, sondern ein Unterschied, der alles oder nichts ausmacht. Die christliche Lehre von exklusiver Erlösung basiert auf dem, was Jesus selbst sagte und was uns die Bibel lehrt und ist eng damit verbunden, wer Jesus ist und unserem Bedürfnis nach Gnade.
ဤအယူအဆနှစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်မှန်ကန်နိုင်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျေးဇူးတရား၏ဆုံးမteacဝါဒကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းမရှိ။
Was ist mit den Menschen, die sterben, noch bevor sie von Jesus gehört haben? Was ist mit den Menschen, die geboren wurden, bevor Jesus gelebt hat? Haben auch sie eine Hoffnung? Ja, die haben sie. Gerade deshalb, weil der christliche Glaube ein Glaube der Gnade ist. Die Menschen werden durch Gottes Gnade errettet und nicht, indem sie den Namen Jesus sagen oder ein besonderes Wien besitzen. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt, unabhängig davon, ob man davon weiss oder nicht (2. ကောရိန္သု 5,14; 1. ဂျိုဟန် 2,2). Sein Tod war das Opfer der Wiedergutmachung für jeden Menschen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ob Palästinenser oder Peruaner. Wir dürfen sicher sein, da Gott seinem Wort treu ist, denn es steht folgendes geschrieben: « er hat Geduld mit euch und will nicht, da jemand verloren werde, sondern da jedermann zur Busse finde» (2. ဓာတ်ဆီ 3,9). Auch wenn seine Wege und Zeiten oft unergründlich sind, vertrauen wir darauf, da er die Menschen, die er erschaffen hat, liebt. Jesus sagte dazu: « Denn also hat Gott die Welt geliebt, da er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, da er die Welt richte, sondern da die Welt durch ihn gerettet werde” (Johannes 3,16-17) ။
ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်သည်သေခြင်းကိုအောင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်သေခြင်းသည်ပင်ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့၏နယ်နိမိတ်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်လူတို့အားကယ်တင်ခြင်းသို့အပ်နှံရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ မည်သို့နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သို့သော်သူ၏စကားတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်သည်၊ သူသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသူသို့မဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းရရန်အသက်ရှင်ရန်အသက်ရှင်သူတိုင်းကိုသူတို့မသေဆုံးမှီ၊ သူမသေဆုံးပြီးနောက် နောက်ဆုံးသောနေ့၌အချို့သူများကခရစ်တော်ထံယုံကြည်စွာ ၀ င်ရောက်ပါက၊ သူတို့အတွက်သူပြုလုပ်ခဲ့ရာများအကြောင်းအနည်းဆုံးတော့သိလျှင်၎င်းသည်သူတို့နှင့်လုံးဝဝေးကွာသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လူများသည်မည်သည့်ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားပါစေခရစ်တော်သည်သူတို့ကိုလမ်းပေါ်မှားယွင်းသောလမ်းများမှလမ်းလွဲစေနိုင်သည်။ သူသည်လူတိုင်းလိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသူမှာဘုရားသခင်၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသက်သေခံသောထူးခြားသောကောင်းကင်တမန်နှင့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်သက်သေခံခဲ့သည်။ ယေရှုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်သီးသန့်ရှိပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်သည်။ သူသည်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုရွေးနုတ်သောသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုလူတိုင်းသိရှိနိုင်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လူတိုင်းလိုအပ်သည့်အရာနှင့်သတင်းကောင်းသည်လူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သတင်းကောင်းမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဖြန့်ဝေထိုက်သောသတင်းကောင်းလည်းဖြစ်သည်။ Dဒါဟာတကယ်ကိုစဉ်းစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။